‘भारतले सडक खनिरहँदा सुतेको सरकार, उद्घाटन गरेपछि ब्युँझियो’ : कांग्रेस सांसद बडू - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > ‘भारतले सडक खनिरहँदा सुतेको सरकार, उद्घाटन गरेपछि ब्युँझियो’ : कांग्रेस सांसद बडू
May 11, 2020 May 11, 2020 GRISHI148
काठमाडौं : नेपाली भूभाग प्रयोग गरि भारतले तिब्बतको मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो निमार्ण गरेकोबारेमा सांसदहरुले सरकारको तयारीबारे जानकारी मागेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारकातर्फबाट परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सिमा विवाद सुल्झाउन कुटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिएपछि सांसदहरुले मन्त्रीलाई प्रतिप्रश्‍न गरेका हुन्।
मन्त्री ज्ञवालीलाई प्रश्‍न सोध्दै कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सरकार बल्ल ब्युँझिएको टिप्पणी गरे। ‘धेरै लामो निन्द्रापछि सरकार आज ब्यूँझिए जस्तो छ । डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो । आज उद्घाटन मात्रै भएको हो’, उनले भने, ‘कहिलेदेखि बन्‍न सुरु भयो ? त्यसको सूचना यो सरकारसँग थियो कि थिएन ? चीन र भारतबीचमा जति बेला समझदारी भयो, त्यतिबेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो।
उसले अत्यन्तै गम्भीर प्रोटेष्ट नोट पठाएको थियो। त्यसपछि आज उद्घाटन हुदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ? त्यसको जानकारी अहिले चाहियो ।’ बडूले सडक बन्दै गरेको सूचना सरकारसँग थिएन भने सूचनामाध्यम समाप्त भएका हुन् कि? भनेर प्रश्‍न गरे। ‘मैले यसबारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टीको बाटो नबन्‍ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको ६ महिना अघि नै बताएको थिएँ’, उनले भने, ‘नेपाली भूमि मिचेर भारतले बनाएको सडक कालापानी-लिपुलेक पुग्दैछ भन्‍ने कुरा बोल्दा पनि ध्यानाकर्षण नहुने? मैले मिडियामा पनि बोलेको छु ।
सरकार के गरेर सुतिरहेको थियो ?’ नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजालले तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लाञ्छना लगाइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। ‘त्यही चीज बोकेर आउनुभएको छ। अलिक अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो । सरकारको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीका दुईवटा मोर्चा तयार भयो,’ उनले भने, ‘एउटा मोर्चा गा-ली गर्ने अर्को मोर्चा डिफेन्स गर्ने।’
रिजालले अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा एउटा मोर्चा सत्तोसराप गर्ने अर्को मोर्चा एमसीसीलाई बोकेर हिड्नुपर्छ भन्‍नेतर्फ लागेको बताए। ‘यसमा पनि सरकार दुईवटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो? कि परराष्ट्रमन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ? संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ?’, उनले सोधे, ‘विपक्षी दलहरुले सहयोग गर्या छ भन्‍नुभएको छ। अब गर्ने के हो? खाली प्रोटेस्ट नोट पठाउँछौ भन्‍ने मात्रैले पुगेन।’
ओलीलाई कविताबाटै गगनको व्यङ्ग्य : यस्तो सबल सरकार छ सीमा कसले मिच्ने,कोही छैनन जोरी खोज्ने को ही छैन्न हेप्ने ।
July 3, 2020 July 3, 2020 GRISHI
थप १३ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १३४